Mudaaharaad ka dhacay Garowe & Galkacyo; haweenka Bossaso oo baaq ka soo saaray colaadda Sool & Cayn. – Radio Daljir
Mudaaharaad ka dhacay Garowe & Galkacyo; haweenka Bossaso oo baaq ka soo saaray colaadda Sool & Cayn.
Garowe, Feb 24 – Shacabka magaalooyinka Garowe iyo Galkacyo ayaa dhigay mudaahaaraad lagu dhalleecaynayo maamulka Somaliland, loogana soo horjeedo colaadda gobollada Sool & Cayn, halka haweenka magaalada Bossaso-na ay soo saareen bayaan ay cabirayaan dareenkoodu ku aadan colaadda ka aloosan gobollada Sool & Cayn.
Banaanbax balaaran oo ka dhacay barxada magaalada Garowe ayaa loogu baaqay Somaliland in ay jooijso colaadda ay ka wado gobolka Cayn.
Banaanbaxayaasha oo u badnaa haweenka magaalada Garowe ayaa ku sheegay ujeedada mudaaharaadku in uu yahay taageero mawqifka dawlada Puntland, iyo dhalleecayn gardarada iyo colaadda uu maamulka Somaliland ka wado gobollada Sool & Cayn.
Banaanbaxaayasha ayaa sidoo kale sheegay in colaadda Somaliland ay wado gobollada Sool & Cayn ay tahay daandaansi aanay aqbali karin, shacabka Puntland-na uu ka midaysan yahay difaaca gobollada Puntland.
Banaanbaxayaasha ayaa ugu baaqay Somaliland in ay ciidamadeeda kala baxdo gobollada Sool & Cayn, ayna joojiyaan colaadda ay ka hurinayaan mandaqadda.
Mudaaharaad kaa la mid ah, ayna soo qabanqaabiyeen haweenka iyo hay’adaha bulshada rayadka ah, laguna dhalleeceeyey colaadda ay Somaliland ka wado gobollada Sool & Cayn ayaa ka dhacay magaalada Galkacyo.
Banaanbaxaaasha ayaa sheegtay in dadka rayadka ah ee ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Cayn laga joojiso colaadda.
Waxaa sidoo kale ay ugu baaqeen shacabka Puntland in uu u guntado taakulanta shacabka gobollada Sool & Cayn ee ay isugu darsameen colaadda iyo abaaruhu.
Sidoo kale, haweenka magaalada Bossaso ayaa bayaan ka soo saaray colaadda gobollada Sool & Cayn, uguna baaqay maamulka Somaliland in uu joojiyo colaadda uu ka hurinayo gobollada Sool & Cayn.
Marwo Faatumo Guduudo oo u hadashay haweenka magaalada Bossaso ayaa sheegtay in colaaddu aanay ahayn mid maslaxadi ugu jirto shacabka Somalida, loona baahan yahay in caqligu shaqeeyo, Soamliland-na ay colaadda joojiso, ciidamadeedana kala baxdo gobollada Sool & Cayn.
Marwo Guduudo waxaa ay ugu baaqay shacabka Puntland in ay si midaysan taageero ugu fidiyaan shacabka gobolka Cayn ee ay colaaddu in dhawaale ka socotay.
Haweenka gobollada Puntland ayaa sidoo kale sheegay in ay ku taageersan yihiin dawlada Puntland ka qayb qaadashada difaaca ee gobollada Sool & Cayn.
M/weynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole ayaa todobaadkan iclaamiyey in dawlada Puntland aanay ogolaan doonin daandaansiga, dhulbalaarsiga, iyo xasuuqa Somaliland ee gobollada Sool & Cayn.
Banaanbaxayaasha ayaa sheegay in mudaaharaadka ay dhigeen uu jawaab u yahay mudaaharaad ka dhacay Hargeysa oo haweenka Somaliland ay ku taageereen maamulka Somaliland dagaalka ka socda gobollada Sool & Cayn.